December 12, 2019 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha December 12, 2019
(Liverpool) 12 Dis 2019. Daafaca garabka bidix kooxda Liverpool ee Andrew Robertson ayaa sheegay inuu kalsooni buuxda ku qabo naadigiisa Reds oo difaacaneysa koobka Champions League. Dhinaca kale Andrew Robertson ayaa wuxuu carabka ku adkeeyay inaysan jirin koox ka mid ah kooxaha u soo baxay wareega xiga ee 16-ka ee dooneysa inay ku beeganto Liverpool isku […]Sii akhriso
(England) 12 Dis 2019. Jilaaga caanka ah reer Mareykanka ee Matthew McConaughey ayaa si maldahan u sheegay kooxda ugu taageerayaasha badan gudaha dalka USA. Matthew McConaughey ayaa iska indho tiray labada kooxood ee Manchester United iyo Liverpool, kuwaasoo taariikh aad u dheer iyo taageerayaal fara badan ku dhax leh adduunka oo dhan, wuxuuna si maldahan u […]Sii akhriso
Saraakiisha Ciidamada Xoogga Dalka oo kala dhexgalay beelo ku dagaalamay gobolka Mudug+Sawirro
Soomaaliya December 12, 2019
Gaalkacyo-(SONNA)- Mas’uuliyiin ka tirsan Ciidamada Xoogga Dalka Soomaliyeed iyo Waxgaradka gobolka Mudug oo ku hawlan daminta xiisado colaadeed oo kasoo cusboonaaday Miyiga gobolka Mudug ayaa sheegay in ay ku guuleysteen in ay kala dhexgalaan maleeshiyo beeleedka. Taliyaha Ciidamada Dhulka S/guuto C/xamiid Maxamed (Dirir) iyo Saraakiisha la socota ayaa kulamo looga Sii akhriso
Ethiopia News December 12, 2019
Ethiopia’s Abiy calls for meeting with Eritrean leader FRANCE 24 What message does Ethiopian PM Ahmed Abiy’s Nobel win send? Aljazeera.com Thousands Welcome Ethiopian Leader After Nobel Peace Prize The New York Times Ethiopians colorfully welcome Nobel Peace Laureate New Business Ethiopia Op-Ed: Ethiopia has a Nobel Prize and a roaring economy. Can it also Sii akhriso
(London) 12 Dis 2019. Macalinka kooxda Tababaraha Tottenham ee Jose Mourinho ayaa sheegay in dhamaan kooxaha ku soo baxay kaalmaha hore heerka group-yada tartanka Champions League ay ka baqayaan inay ku wajahaan naadiga Spurs-ka wareega 16-ka ee bug baxda. Tottenham Hotspur ayaa u soo baxday wareega xiga 16-ka ee Champions League, kaddib markii ay kaalinta labaad […]Sii akhriso
Mashruuca korontada ee magalada Qabri-dahar oo gabogabo maraya.
DDS December 12, 2019
Mashruuca quwada korontada ee magaalada qabri dahar oo mudo socday ayaa maraya meel gabogabo ah. Mashuruucan laydhgalinta qabridahar ayaa waxaa la dhamaystiray tiirashii laydhka ee Goday laga soo jiidayey oo soo dhaxmaraya inta udhaxaysa magalada goday ilaa iyo qabridahar tuulooyinka uu marayona looga faaidayn doono helitaanka laydhka. Waxaa kale oo dhamatay dhismaha Sii akhriso
Zambia.(S0NNA):- Madaweynaha dalka Zambia ayaa warqadaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka Soomaaliya ee dalkaas, Marwa Xaawo Xasan Maxamed. Safiiradda ayaa ugu horreyn dhambaal iyo Salaam ay ka sidday Madaxweynaha Soomaaliya gaarsiisay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Zambia. Sidoo kale wax ay xusuusisay Madaxweynaha dalkaas Safiirka xiriirka taariikhiga ah ee labada dal, iyadoo Sii akhriso
Agaasimaha Madaxtooyada oo wada hadallo la yeeshay Danjiraha Jaamacadda Carabta iyo Madaxa IOM ee Afrika+Sawirro
Muqdisho.(SONNA):- Agaasimaha Madaxtooyadda Qaranka Dr. Nuur Diiriye Xirsi (Fuursade) oo Madaxtooyada ku qaabilay Safiirka Jaamacadda Carabta ee Soomaaliya Danjire Xamuud Samraan Al-xuweydi ayaa ka guddoomay dhambaal ku wajahan Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaas oo uu soo diray Xoghayaha Guud ee Jaamacadda Carabta Mudane Axmed Abuu Alqeyd. Danjire Xamuud ayaa Sii akhriso
(Madrid) 12 Dis 2019. Zinedine Zidane ayaa shaaca ka qaaday inuusan wax walwal ah ka qaabin kooxda ay kaga beegmi doonto Real Madrid wareega 16-ka ee tartanka Champions League. Kooxda Real Madrid ayaa saddexda dhibcood ka soo qaadatay naadiga Club Brugge oo ay booqatay, waxayna kaga soo adkaatay 1-3, Los Blancos ayaa goolasheeda waxay kaga […]Sii akhriso
Madaxwaynaha Oo Booqday Xarunta Daryeelka baahiyaha gaarka ah qaba DDS.
Madaxwaynaha dawlada deegaanka Soomaalida mudane Mustafe Muxumed Cumar ayaa booqday xarunta daryeelka iyo daawaynta dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo laga hirgaliyay xarunta deegaanka soomaalida ee magalada jigjiga. Madaxwaynaha ayaa intii uu ku gudo jiray booqashadan soo kormeeray qaybaha kala duwan ee xaruntani ka kooban tahay halkaasina waxaa faafaahin ka siiyay qaar Sii akhriso